We Fight We Win. -- " More than Media ": အရည်အချင်း ကင်းမဲ့ လွန်းတဲ့ ဒုသမတ ( ခိုင်အောင်ကျော်)
အရည်အချင်း ကင်းမဲ့ လွန်းတဲ့ ဒုသမတ ( ခိုင်အောင်ကျော်)
သွားပြီ ကိုခိုင်အောင်ကျော်ရေ။ ခင်ဗျားကို တော်တော်သနားတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျား နယူးယောက်မှာနေပြီး ခင်ဗျား ဖြစ်ချင်တာတွေဘဲ ထိုင်ပြောနေတယ်။ ခင်ဗျား ဗဟုသုတ မရှိဘူး၊ စာမဖတ်ဘူး ဆိုတာ ခင်ဗျားရေးထားတာတွေက ၀န်ခံနေတယ်။ ခင်ဗျား မပြောနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဆရာမကြီးတောင် သွားဖြဲပြီး လွတ်တော်ထဲမှာ ဘာမှ့ လုပ်မရဘဲ ထိုင်နေတာသာကြည့်တော့။ ဒါဆို ခင်ဗျား သဘောပေါက်။
Ne Win isashit and fool and will be judged as this in Burma history, no doubt.
u r idiot.Put this in ur brain.Ur master Sayama gyi always said"If u want to get change,do it urself.'Thats means,u can vote her but she has no responsible for country.